Audio Drive Problem — MYSTERY ZILLION
July 2012 edited July 2012 in Help Desk
ကျနော် ဒီနေ့ ဝင်းဒိုး အသစ်တင်တယ်ဗျာ။ ဝင်းဒိုး XP ကနေပြီး Windows7ကိုပြောင်းတင်လိုက်တာ.. အသံလုံးဝ ပျောက်သွားတယ်။ Drive manger ကနေ သွားစစ်ကြည့်တော့လဲ အဆင်ပြေစွာ အင်စတော လုပ်ထားကြောင်းပြနေတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ အသံကတော့ လုံးဝကို မလာဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ Task bar မှာရှိတဲ့ speaker အိုင်ကွန်ကလည်း ကြက်ခြေခတ်ပြနေတယ်ဗျာ။ ဘာအသံမှကို မလာဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ အစ်ကိုအစ်မများ ကူညီကြပါဦး။
post screenshots of your device manager
if it's fine, then download latest drivers for windows7and try again. if you are not sure which driver, search in google for deviceid. like this